Oge kachasị mma Amazon Prime Day na-emekọ maka July 11 | Gam akporosis
Amazonbọchị kacha mma Amazon Prime Day na-eme maka July 11
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Noticias
Amazon amalitela ahịa ya Ụbọchị Amazon Prime Day 2017. Storelọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị ewu ewu na ụwa na-enye ndị ọrụ butere ọrụ Prime ọrụ na-enye ọtụtụ ezigbo kemmiri onyinye.
N'afọ a ọ dị ka Amazon ga-etinye anụ niile na grill iji nye onyinye a na-apụghị imeri emeri yabụ na anyị emeela obere nchịkọta ekwentị kacha mma na ngwaọrụ ka ị ghara ịhapụ ohere iji nweta ụfọdụ ahịa.
Ndị a bụ onyinye kachasị mma nke Amazon Prime Day 2017
Nnukwu ego m hụrụ n’ihe banyere ekwentị bụ - ZTE Axon 7, ngwaọrụ ị nwere ike ịzụta site na ịme pịa ebe a site na Amazon maka naanị 347 euro. Pụrụ ịhụ nyocha anyị ebe anyi n’egosi gi ihe nzuzo nile nke ekwentị zuru oke.
Cheta na ZTE Axon 7 nwere ihuenyo 5.5-inch, Qualcomm Snapdragon 820 processor, 4GB nke RAM na 64GB nke nchekwa dị n'ime, ihe niile a elu-ọgwụgwụ na nnukwu ụda àgwà na a groundbreaking price.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a dị ọnụ ala karịa gam akporo ekwentị, ị ga-enwe na July 11 na Moto G5 Plus maka naanị 219 euro na ịpị ebe a. Ekwentị elu dị n'etiti etiti na 3 GB nke Ram na ihuenyo 5.2-anụ ọhịa Full HD.
Maka egwuregwu kachasị nwee, ndị Garmin Forerunner 235 gbadara 30%, na-esi na euro 349 gaa naanị 245 euro na ịpị ebe a. Ejiri ejiji zuru oke nke ga - enyere gị aka nyochaa ọrụ ọ bụla ị na - eme, gụnyere mmụba nke obi.
Na ndị hụrụ egwu n'anya enweghị ike ịhapụ azụmahịa Amazon Prime Day iji jide ụfọdụ Vtin Royale ikuku okwu gịnị ka ị nwere ike zụta site na ịpị ebe a maka naanị 49.99 euro. Site na obodo kwụụrụ onwe nke 8 awa na atụmatụ adịchaghị, ndị na-ekwu bluetooth a ga-adị mma n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ gị.
Kedu ihe ị chere gbasara onyinye ndị a maka July 11 na Amazon Prime Day 2017?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Amazonbọchị kacha mma Amazon Prime Day na-eme maka July 11
Doogee MIX in omimi tinyere mba inye onyinye!
5 ngwa gam akporo iji were igwefoto igwefoto gị dijitalụ (DSLR)